Umlingisikazi Nurgul Eshilchay: Biography, Filmography, ukuphila siqu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Omunye enhle kakhulu actress Turkish - Nurgul Eshilchay, biography lapha ngenzansi, baye eside ijwayelekile izethameli Russian ku-Turkish ewuchungechunge yethelevishini. Muva nje, babebona ke, futhi indima Isihloko entsha emikhulu ithelevishini iphrojekthi "Century Ezinhle:. Kösem Sultan" Kulokhu, bambalwa ujwayelene biography yayo, nakuba bebaningi ngubani ongathanda ukufunda imininingwane singakunaki ukuphila komuntu umdlali waseshashalazini. Ake uqale kusukela ekuqaleni.
Umlingisikazi Nurgul Eshilchay, biography lapha ngenzansi, ngizalwa emzini Turkish e Afyonkarahisar ngo-1976 waba. Nokho, maduzane nje, nomndeni wentombazane kuhanjiswe ku Izmir, lapho yena kuphothula esikoleni esiphakeme. Kakade kweminyaka eminingi yocwaningo Nurgul wayevelele phakathi ontanga ubuhle nesifiso ukuthatha ukuhlanganyela ngenkuthalo yonke imisebenzi yesikole, lapho-ke kwakudingekile ukuba avele enkundleni.
Naphezu yokuqala ibonise uthando esigabeni, kuqala Nurgul Eshilchay, biography iyathakazelisa abalandeli abaningi, wakhetha i-career njengosomaqhinga nawukuthi wangeniswa emnyangweni ofanele we Anadolu Inyuvesi ekhatsi Eskisehir. Naphezu kwentuthuko cwaningo, yesehlakalo baqhubeka ukuheha intombazane futhi Nurgul baqhubeka imfundo yakhe eMnyangweni Drama of the nyuvesi.
Ngemva kokuthweswa iziqu, wenza izindima eziningana ehola enkundleni. Phakathi kwazo indima Ophelia e "Hamlet" kaShakespeare futhi UBlanche emdlalweni "Tram Desire". Ngaphezu kwalokho, eneminyaka engu-iminyaka engu-23, waqala ukusebenza ngo-ithelevishini, futhi ngokushesha Nurgul ubuhle wafika ukunakwa abenzi mafilimu.
Ukuba wathola iziphakamiso eziningana ezithakazelisayo yena, wavuma ukuhamba yaseshashalazini kanye izinkanyezi ku 3-Turkish ithelevishini idrama. Isithombe sokuqala nge Nurgul Eshilchay, Umlando womuntu ophilako nomona ontanga ayiphumeleli kahle, ngokuthi "Zonke kuyoba kahle" futhi wethulwa izilaleli ngo-1998. Kuyo wadlala uqobo kancane futhi izilaleli wayethanda ecacile nangobuqotho wokwenza.
Kepha ukuthwetshulwa movie, DEBUT Nurgul Eshilchay esikrinini esikhulu senzeka ngo-2001. ithalente yakhe yaphuma kokubili izibukeli nochwepheshe kanye nozakwabo nakho okwengeziwe, ngakho Nurgul iwine umklomelo for Best Actress ngesikhathi 45th Film Festival e Antalya.
Enye yemisebenzi actress - indima emlandweni emzaneni, "u-Adamu no uDeveli" filmmaker Turkish Baris Pirhasan. Le ndlela ungakwazi futhi kubhekwe yimpumelelo, njengoba ngo-2007-ke waklonyeliswa amajaji edumile Istanbul Film Festival.
Umsebenzi esimnandi kakhulu
Omunye imisebenzi best of actress, yebo, Ingumfanekiso Yasemin ngendlela enhle egcwele idrama kinosage "Ukungabi khona kothando Ziyisijeziso". Lolu chungechunge ithelevishini esiye emazweni amaningi ngaphandle kwe-Turkey, ngakho uye eside Nurgul kwaba bayibutho ngempela omkhulu abalandeli phesheya. Ayathanda izindima zakhe ezintsha kanye nempilo yakho.
Ngokuphathelene nobuhlobo wefilimu baxgeki ekwenzeni umsebenzi wakhe, ku umbono wabo, ukuba umdlali kwakukuhle kakhulu ochungechungeni TV "uMlobokazi," lapho umlingisi losemcoka kudlalwa Ezo. Lapho umutu abambisene naye emsebenzini TV Nurgul esebeké eziningi umzamo ukuze adlulisele umlingisi kanye isiphetho enzima ye uhlamvu wakhe. Uchungechunge yimpumelelo futhi wabonisa ngaphandle Turkey.
Biography Nurgul Eshilchay: umyeni (ngaphambili) nendodana
Lapho ngineminyaka engu-28, lapho wayephumelela kakhulu owaziwa e-Turkey, actress washada ethandwa ngesikhathi umlingisi Cem Eseri, ngubani wayemdala kunezingane wakhe iminyaka engu-17. Manje ubizwa ayisekho likhishwa, kodwa ngesinye isikhathi kwadingeka bayibutho elikhulu labalandeli. Ngasekuqaleni Dzhem Eseri wayeshade Selin Delmen futhi ohlukanisile wakhe ukuze wenze umnikelo Eshilchay. Nokho, njengoba wazi, injabulo ku usizi yomunye ayikwazi eyakhelwe, futhi umshado nge Nurgul inqanyuliwe ngo-2010.
Ukwahlulela ngokubukeka izincwadi emaphephandabeni, isizathu owaba umyeni nomona, ngubani, ukuba ukwehla kwenkonzo yakhe, azwela kakhulu ekuphumeleleni nomkayo, abenze, kunalokho, kuyanda nsuku phezulu kule plan okhokhelwayo.
Ngu Jem Jezera, actress unendodana Osman ngubani kakade engu-11 ubudala. Owesifazane akuthandayo, futhi ngokuvamile enqaba ukunikezwa ukudlala e ezinhlelweni lapho iqhaza kudinga usuke ungekho eside ekhaya.
Iqhaza Kösem Sultan
Ekuqaleni Novemba 2015 kwi Star wesiteshi, kudlalwé iphrojekthi entsha TV, okuyinto ngezinga elithile phambili Emazweni amaningi kwanda yochungechunge "Ezinhle Century" mayelana nokubusa Suleiman le Ezinhle. Nurgul Eshilchay, biography usuvele ujwayelene, waba wajuba ukudlala indima ekulu Kösem Sultan - ongokomlando wangempela - Valide Sultan Murad ngesikhathi Okwesine futhi Okokuqala Ibrahim. Ekuqaleni iphrojekthi ke wahlabelela abasha Beren Saat. A isithombe Venetian abasha, okwakubekelwa eyanikelwa elidala Walid ongumninimandla umzukulu eyithandayo esizayo Sultan Ahmed Okokuqala lapho isikhulile, ithole Nurgul.
It is kahle lapho zibhekene nomsebenzi, futhi umbukeli, hhayi kuphela e-Turkey kodwa futhi Georgia, Hungary, Iran, e-Indonesia, futhi elinye lamazwe ayishumi wajabulela "Kesemen wakhe".
By the way, ubuhle Nurgul Eshilchay, biography, umkhaya nokuphila kwangasese ezibangela isithakazelo esiqotho omphakathi, e ifilimu ngempilo yabesifazana Ahmed Okokuqala bakhanya sibonga ngisho licace ukuba zokulingisa zikanokusho, siye beveza Abaklami ingcaca yephrojekthi.
actress Turkish Nurgul Eshilchay, biography usuvele ujwayelene, odlale e ezingaphezu kuka-10 ochungechungeni futhi inani elifanayo movie. Phakathi kwabo:
"Kösem Sultan" (indima esemqoka, 2016);
"Vdrebezgi" (1 kuya 52 Series 2014);
"Umsebenzi Wezingane" (Candan 2013);
"Ngaphandle Olmaz" (indima Ferjan 2011);
"Ukungabi khona kothando Ziyisijeziso" (Yasemin 2010);
"Ezo Gelin" (indima esemqoka, 2006);
Belali Baldız (2005);
"Angel Island" (indima Aisha futhi sorbets, 2004);
Ivy Mansion (Bahar Karadag, 2002);
"90-60-90" (indima UDenise, 2001);
"Enye Spring" (2001).
Phakathi abadlali ifilimu credits zihlanganisa esithombeni:
"Amadoda Eziyisikhombisa Hyurmyuz"
"U-Adamu no uDeveli"
"Kuyoba kuhle kakhulu. '
Nurgul Eshilchay: Biography siqu namuhla
Okwamanje, actress inkanyezi kule midlalo ye-TV "Kösem Sultan" futhi kungenzeka ukuba aqhubeke emsebenzini walo futhi 2017. Ngokuphathelene singakunaki ukuphila komuntu lona wesifazane abanamakhono, bese-ke has a umyeni lojwayelekile - umqondisi Tolga Karachelik.
Uma kokuba beshadile actress akuseyona ubudlelwane uzimisele "nge isitembu e passport," ngakho lo mbhangqwana akazange aphile isikhathi eside ndawonye. Ngakho, i-Union akuyona nje civil kodwa futhi isivakashi, futhi lo muntu main emphilweni actress uyaqhubeka indodana yakhe Yinhle.
Naphezu ubuhle, Nurgül Eshilchay awuhambanga endleleni, evamile ngoba abadlali Turkish, hhayi besazama ukufeza futhi ukumodeliswa career, waba imfundo professional sina.
Nakuba uye esiqaliwe neshumi leminyaka 5th, owesifazane isesimweni enkulu ukwanda ngabantu abangaba ngu-163 cm ukala mayelana 52 kg. Lo mlingisi Liyindawo ekhululekile amehlo aluhlaza kanye konsundu ku ubunjalo izinwele, okuyinto yena ngokuvamile repainted omnyama.
Nurgül Eshilchay uthanda amakati futhi kuyinto wasemuva asebenzayo kwezilwane.
Ngisho nalapho ngiseyingane, actress kwavulela ikhono ukudweba, futhi ingxenye isikhathi sakhe khulula yena ayehlukanisele imidwebo.
Nurgül Eshilchay 'Kwakho "ngolwazi ubuchwepheshe, ngakho-ke has nekhasi layo ku-Instagram, ujabula abalandeli ngezithombe zabo ezintsha.
Okwamanje, zomthetho okuqhubekayo ehlobene nesehlakalo, ngenxa okuyinto Nurgul Eshilchay kwadingeka balishiye leli uchungechunge "Vdrebezgi". Njengoba kwaziwa emaphephandzabeni, yena wangena nehlazo, nokuthuka kwelinye izingxoxo yakhe, le nkosikazi wangaphambili kuphrojekthi - Erkan Petekkayu. Lo mlingisi sekugcwalisiwe wakhe enkantolo, futhi akwaziwa ukuthi isivivinyo kungaqedwa ngoba actress.
Manje uyazi ukuthi ubani lo Nurgül Eshilchay, biogrfiya Filmography futhi okuyinto esixoxe. Kwethenjwa ukuthi ukuba umdlali uzoqhubeka sokujabulisa abalandeli babo izindima ezithakazelisayo futhi ongasoze.
Overman Celia: Biography
Alex Kolyshevsky: Biography, nohlu lwamabhuku amaqiniso athakazelisayo
Mental Magic: Secrets kanye umzimba
21213 "Niva" - Tuning ingaphakathi, eziqondisa kanye kit umzimba omusha
Semithambo ukuhlinzwa dlula yezingalo nemilenze engezansi: izinkomba, imiphumela
Sea bass ephekwe ucwecwe: esihlwabusayo ngokumangalisayo futhi sikhulu eziwusizo
Ukwelashwa Khwehlela e amakhambi izingane abantu
Iyokwanda kanjani isimiso esisha-patent intela
Idolobha Wezingane ukuzibonakalisa "Kidburg": Izibuyekezo
Ingakanani tattoo? Ukwenza isinqumo esihle